Nepali Christian Bible Study Resources - उहाँको अनुग्रहको धन
» इसाई जीवन » उहाँको अनुग्रहको धन
२१५ ओटा सत्यताहरू
"ईश्वरको अनुग्रह हेरी ऋणी आफूलाई ठान्छु! -- रोबर्ट रबिन्सन्
"उहाँमा हामीले, उहाँको अनुग्रहको धनअनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौं" (एफेसी १:६)।
"तर म जे छु, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै छु" (१ कोरिन्थी १५:१०)।
"अब हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले, र परमेश्वरले अर्थात् हाम्रा पिताले, जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, र अनुग्रहद्वारा हामीलाई अनन्त सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुभएको छ, तिमीहरूका हृदयहरूलाई सान्त्वना दिऊन्, अनि हरेक असल वचन र काममा तिमीहरूलाई स्थिर पारून्" (२ थेस्सलोनिकी २:१६-१७)।
ख्रीष्टमा विश्वासीले पाएको छुटकारा र क्षमाको कुरा गर्दा पावलले "उहाँको अनुग्रहको धन" (एफेसी १:७) भनेर उल्लेख गर्छन्। अर्को ठाउँमा उनले "तर म जे छु उहाँको अनुग्रहले छु" (१ को १५:१०) भन्छन्। हरेक विश्वासीलाई परमेश्वरले अनन्त सान्तवना र अनुग्रहद्वारा असल आशा दिनुभएको छ (२ थेस्स २:१६-१७)। २ को ८:९ पढ्नुहोस् -प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह जान्दछौ- तिमीहरू धनवान् हुन सक भनेर।
धेरैजना विश्वासीहरू उनीहरूले पाएको धनहरूको महत्त्व बुझ्नलाई असफल भइरहेका हुन्छन्। fail to appreciate. एक वृद्ध चाँदी खनकले पश्चिम अमेरिकाको पहाडहरूहुँदो चाँदीको खोजीमा आफ्नो जीवनै बिताए। आफ्नो खोजीमा उनी यति तल्लीन भएका थिए कि उनकी पत्नी र बालबाच्चाहरूले समेत उनलाई त्यागिदिएका थिए। उनी मरेपछि उनलाई दफन गर्न आएका दुईचार जनाले उनको साथमा एउटा सानो कागत भेट्टाए जसमा उनलाई उनकै छाप्रोमुनि दफन गरियोस् भन्ने निर्देशन लेखिएको पाइयो। साबेलले जमीन खन्दै जाँदा त्यहाँ खरानी रङ्गको चमकदार पद्धार्थ देखापर्न थाल्यो। त्यहाँ त क्यालिफोर्निया राज्यकै इतिहासमा सबैभन्दा मूल्यवान् चाँदी खानी भेटियो जुनचाहिँ "कम्स्टक सिल्भर भेन" को नामले प्रख्यात भयो! त्यो खनक, एक खरबपति भए तापनि जीवनभरि उनलाई आफ्नो सम्पत्तिको कहिल्यै पत्तो भएन अनि उनले आफ्नो सम्पत्तिको कहिल्यै उपभोग गरेनन्। उनले आफ्नो प्राप्तिलाई कहिल्यै प्राप्त गरेनन्। त्यो उनकै भएर पनि त्यो उनको हुन सकेन। उनले आफूसँग भएको कुराको कहिल्यै उपभोग गरेनन्।
हरेक साँचो विश्वासी एक आत्मिक खरबपति हो। बाइबलले बताउँछ, ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति गरिब हुनुभयो (र हाम्रो लागि मर्नुभयो) ता कि उहाँको गरिबीद्वारा हामी धनवान हुन सकौं (२को८:९)। विश्वासीहरू, राजाका सन्तान भएर पनि कतिपटक एउटा माग्नेजस्तै भएर हिँडिरहेको हुन्छ जब कि ऊ त एउटा राजकुमारजस्तै भएर जिउनुपर्ने हो। उहाँको अतुलनीय अनुग्रहले हामी कति धनवान् छौं भन्ने कुरा हामीले जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। पढ्नुहोस - एफेसी १:३। हरेक आत्मिक आशिशले आशिषित छौं हामी!
हाम्रा सम्पत्ति के के हुन् भनेर जानेनौं भने हामी तिनलाई उपभोग गर्न सक्दैनौं। हामीले हाम्रो बोलावट के हो भनेर जानेनौं भने हामी हाम्रो बोलावटको योग्य चालमा हिँड्न सक्दैनौं (एफेसी ४:१)। परमेश्वरको वचनमा पाइने गहकिला तथ्य र सत्यताहरूलाई विश्वासैद्वारा दाबी गरिनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टमा जसरी देख्नुहुन्छ हामीले आफूहरूलाई त्यसरी नै देख्नुपर्छ। हामीलाई ख्रीष्टमा जे दिइसकिएका छन् तिनलाई हामीले विश्वासैद्वारा दावी गर्नु पर्छ।
हामी कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई सिकाउँछ (तीतस २:११-१४)। परमेश्वरको सिकाउने तरिका चाहिँ उहाँले अनुग्रहमा हाम्रो निम्ति के के गरिदिनुभएको छु भन्ने कुरा हामीलाई पहिला देखाउनु हो, अनि त्यसपछि त्यसअनुसार हिँड्नलाई हामीलाई बताउनु हो। एफेसी ५:८ ले यस कुरालाई छर्लङ्ग पार्छ (यसको राम्रो उदाहरण हो): किनकि तिमीहरू एक समय (नयाँ जन्म नपाएको पहिलाको समय) अन्धकार थियौ, तर अब तिंमीहरू प्रभुमा ज्योति हौ: ज्योतिका सन्तानझैं हिँड।" हामी जो हौं त्यसैको आधारमा हामी हिँड्नुपर्छ। हामी "जो हौं त्यही हुनुपर्छ"। हाम्रो अवस्था हाम्रो महिमित ओहोदासित मेल खानुपर्छ"। ख्रीष्टमा भएको हाम्रो ओहोदाका महिमित तथ्यहरूलाई हामीले विश्वासैद्वारा जति बलियो गरी पक्रन्छौं, त्यति नै गरी हामी यस संसारमा प्रभुसित हिँड्ने क्रममा यसले हाम्रो वास्तविक अवस्थालाई (हिँडाइलाई) असर पार्नेछ।
हाम्रो समझका आँखाहरू उज्याला पारिएका होऊन्, ताकि हामीले उहाँको बोलावटको आशा के रहेछ, आदि (एफेसी १:१८-१९)।
मेरो उद्धार पूर्ण रूपले सम्पन्न भइसकेको छ (यूहन्ना १९:३०)।
मसँग वर्तमान सम्पत्तिकै रूपमा अनन्त जीवन छ (यूहन्ना ५:२४; ६:४७; १ यूहन्ना ५:११-१३)।
मसँग वर्तमान सम्पत्तिकै रूपमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ (१ यूहन्ना ५:१२)।
म एकमात्र, सत्य परमेश्वरलाई चिन्दछु (यूहन्ना १७:३; १ यूहन्ना २:३; ५:२०)।
उहाँको अनुग्रहले मैले मुक्ति पाइसकेको छु (एफेसी २:१-१०)।
उहाँको अनुग्रहले म धर्मी ठहरिसकेको छु (तीतस ३:७)।
म मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेको छु (यूहन्ना ५:२४; १ यूहन्ना ३:१४)।
परमेश्वरले मलाई जीवित पारिसक्नुभयो (एफेसी २:१,५; कलस्सी २:१३)।
परमेश्वरले मलाई स्वर्गको लागि योग्य बनाइसक्नुभयो (कलस्सी १:१२)।
मैले पापहरूको क्षमा पाइसकें (एफेसी १:७; कलस्सी १:१४)।
मेरा पापहरू हटाइसकिए (यूहन्ना १:२९; हिब्रू ९:२६; १ यूहन्ना ३:५)।
मेरा पापहरू पूरै शुद्ध पारिसकिए (हिब्रू १:३)।
मेरा पापहरूलाई परमेश्वरले कहिल्यै सम्झना गर्नुहुनेछैन (हिब्रू ८:१२; १०:१७)।
म धोइसकिएँ (१ कोरिन्थी ६:११; तीतस ३:५; प्रकाश १:५)।
म ख्रीष्टसँग सेतो वस्त्र पहिरेर हिँड्नेछु (प्रकाश ३:४-५)।
म उहाँका कोर्राका चोटहरूले निको भइसकें (१ पत्रुस २:२४)।
मलाई सबै पापहरू क्षमा गरिसकिए (कलस्सी २:१३; १ यूहन्ना २:१२)।
म पूरै धर्मी ठहरिसकिएँ (रोमी ४:५; ८:३०; १ कोरिन्थी ६:११; गलाती २:१६; तीतस ३:७)।
परमेश्वरसित मेरो मिलाप भएको छ (२ कोरिन्थी ५:१८-१९; कलस्सी १:२०)।
म ख्रीष्टको रगतले नजिक पारिएको छु (एफसी २:१३)।
मैले छुटकारा पाएको छु (१ पत्रुस १:१८-१९; एफेसी १:७; कलस्सी १:१४)।
मैले व्यवस्थाको श्रापबाट छुटकारा पाएको छु (गलाती ३:१३)।
मैले सबै अधर्मबाट छुटकारा पाएको छु (तीतस २:१४)।
म दाम तिरी किनिएको छु (१ कोरिन्थी ६:२०; ७:२३)।
मैले यति ठूलो मृत्युबाट छुटकारा पाएको छु (२ कोरिन्थी १:१०)।
मैले यस वर्तमान दुष्ट संसारबाट छुटकारा पाएको छु (गलाती १:४)।
मैले अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा पाएको छु (कलस्सी १:१३)।
मैले पछि आउने क्रोधबाट छुटकारा पाएको छु (१ थेस्सलोनिकी १:१०)।
म दण्डको आज्ञामुनि अर्थात् न्यायमा पर्नेछैन (यूहन्ना ५:२४; रोमी ८:१)।
म परमेश्वरको सन्तान भएको छु (यूहन्ना १:१२; रोमी ८:१६; गलाती ३:२६; १ यूहन्ना ३:१-२)।
म परमेश्वरको एक पुत्र भएको छु (गलाती ४:५-७)।
म येशू ख्रीष्टको भएको छु (गलाती ३:२९; ५:२४)।
मलाई धर्मपुत्रको रूपमा ग्रहण गरिएको छ (गलाती ४:५; रोमी ८:१५,२३)।
म परमेश्वरको हकवाला बनेको छु र ख्रीष्टसँग साझा-हकवाला बनेको छु (रोमी ८:१७; तीतस ३:७)।
म जीवनको अनुग्रहको हकदार भएको छु (१ पत्रुस ३:७)।
सबै कुराहरू मेरा हुन् (१ कोरिन्थी ३:२१-२३)।
मसँग सबै थोक छन् (२ कोरिन्थी ६:१०)।
म सबै कुराहरूको हकदार हुनेछु (प्रकाश २१:७)।
हरेक कुरामा म उहाँद्वारा धनवान् बनाइएको छु (१ कोरिन्थी १:५)।
म एक साझा-हकवाला भएको छु (एफेसी ३:६)।
ख्रीष्टको कारण म धनवान् भएको छु (२ कोरिन्थी ८:९; प्रकाश २:९)।
म सबै आत्मिक आशिषहरूले आशिषित पारिएको छु (एफेसी १:३)।
मैले हकको सम्पत्ति पाएको छु (एफेसी १:११,१४; हिब्रू १:१४; ९:१५; १ पत्रुस १:४)।
मैले मुक्ति पाऊँ भनी म ठहराइएको छु (१ थेस्सलोनिकी ५:९; हिब्रू १:१४)।
म उहाँको अधिकारको सम्पत्ति भएको छु (एफेसी १:१८)।
म सुसमाचारद्वारा ख्रीष्टमा उहाँको प्रतिज्ञाको साझा-भागीदार भएको छु (एफेसी ३:६)।
म ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि भएको छु (२ कोरिन्थी ५:१७; एफेसी २:१०; ४:२४; कलस्सी ३:१०)।
म पवित्र आत्माले नवीकरण गरिएको छु (तीतस ३:५)।
म उही प्रियमा ग्रहणयोग्य तुल्याइएको छु (एफेसी १:६)।
म ख्रीष्टमा स्वर्गीय स्थानहरूमा बसालिएको छु (एफेसी २:६)।
म उहाँको महिमाको प्रशंसाको कारण भएको छु (एफेसी १:१२)।
म प्रभुमा ज्योति भएको छु (एफेसी ५:८)।
म ज्योतिको सन्तान भएको छु (एफेसी ५:८; १ थेस्सलोनिकी ५:५)।
म एक "विशेष व्यक्ति" भएको छु, परमेश्वरको किनिएको विशेष सम्पत्ति (तीतस २:१४; १ पत्रुस २:९)।
म आत्मिक बलिदानहरू चढाउन सक्ने पूजाहारी भएको छु (हिब्रू १३:१५-१६; १ पत्रुस २:५,९; प्रकाश १:६; ५:१०; २०:६)।
म एक शासन गर्नेवाला राजा भएको छु (प्रकाश १:६; ५:१०; २०:६)।
पितासँग र उहाँका पुत्रसँग सङ्गति गर्ने सौभाग्य मेरो भएको छ (१ यूहन्ना १:३)।
ख्रीष्टभित्र रहन्छु (यूहन्ना ६:५६; १ यूहन्ना ३:२४; ४:१३,१५,१६)।
ख्रीष्ट मभित्र रहनुहुन्छ (यूहन्ना ६:५६; गलाती २:२०; १ यूहन्ना ३:२४; ४:१३-१६)।
म ख्रीष्टभित्र छु (यूहन्ना १४:२०; २ कोरिन्थी ५:१७)।
ख्रीष्ट मभित्र हुनुहुन्छ (यूहन्ना १४:२०; रोमी ८:१०; १ यूहन्ना ४:४)।
परमेश्वरको आत्मा मभित्र रहनुहुन्छ (रोमी ८:९; १ कोरिन्थी ३:६; एफेसी २:२१-२२)।
म शरीरमा होइन तर आत्मामा छु (रोमी ८:१९)।
मेरो माटोको भाँडोमा ठूलो धन रहेको छ (२ कोरिन्थी ४:७)।
मेरो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर भएको छ (१ कोरिन्थी ६:१९)।
म पवित्र आत्माको दान र बैनाद्वारा आशिषित बनाइएको छु (१ कोरिन्थी १:२२; गलाती ४:६; एफेसी १:१३-१४; १ थेस्सलोनिकी ४:८; तीतस ३:६; १ यूहन्ना ३:२४; ४:१३)।
मसँग पवित्र आत्माबाटको अभिषेक छ (१ यूहन्ना २:२०)।
म ख्रीष्टका बोलाइएकाहरूमध्ये एक हुँ (रोमी १:६; ८:२८-३०; यहूदा १; प्रकाश १७:१४)।
म परमेश्वरको पुत्रसँगको सङ्गतिमा बोलाइएको छु (१ कोरिन्थी १:९)।
म अनन्त महिमामा बोलाइएको छु (१ पत्रुस ५:१०)।
म पवित्र बोलावटले बोलाइएको छु (२ तिमोथी १:९)।
म उच्च र स्वर्गीय बोलावटको भागीदार भएको छु (फिलिप्पी ३:१४; हिब्रू ३:१)।
म अन्धकारबाट उहाँको अचम्मको ज्योतिभित्र बोलाइएको छु (१ पत्रुस २:९)।
परमेश्वरले मलाई पहिले नै जान्नुभएको थियो (रोमी ८:२९; १ पत्रुस १:२)।
परमेश्वरले मलाई ख्रीष्टको रूपमा ढालियोस् भनेर पहिले नै ठहराउनु भयो (रोमी ८:२९; एफेसी १:५, ११)।
परमेश्वरको विचार र मनसायमा मलाई महिमा दिइसक्नुभयो (रोमी ८:३०)।
म परमेश्वरको प्रेममा अनन्तसम्म सुरक्षित छु (रोमी ८:३८-३९)।
म ख्रीष्टमा चुनिएको छु (एफेसी १:४; कलस्सी ३:१२; १ थेस्सलोनिकी १:४; १ पत्रुस २:९; प्रकाश १७:१४)।
म मुक्तिका निम्ति चुनिएको छु (२ थेस्सलोनिकी २:१३)।
म ख्रीष्टमा पूर्ण भएको छु (कलस्सी २:१०)।
म परमेश्वरको प्रिय भएको छु (कलस्सी ४:१२; २ थेस्सलोनिकी २:१३)।
मैले मेरा स्वर्गका पिताको ताडना र अनुशासन पाउँदछु (हिब्रू १२:६-७)।
म त्यो समूहको भएको छु जसलाई ख्रीष्टले आफ्ना "भाइहरू" र "मित्रहरू" भन्न शर्माउनुहुन्न (हिब्रू २:११; यूहन्ना १५:१५)।
म अब्राहामको सन्तान हुँ (गलाती ३:७)।
म अब्राहामको वंश हुँ (गलाती ३:२९)।
म अब्राहामको आशिषमा रमाउँदछु (गलाती ३:९)।
म प्रतिज्ञाको सन्तान हुँ (गलाती ४:२८,३१)।
म एक विश्वासयोग्य हुँ (प्रकाश १७:१४)।
म उहाँको बगालमा एक भेँडा हुँ (लूका १२:३२; हिब्रू १३:२०; १ पत्रुस २:२५)।
म उहाँको शरीरको अङ्ग हुँ (१ कोरिन्थी १०:१७; एफेसी ३:६; ४:२५; ५:३०)।
म उहाँको भवनको एउटा पत्थर हुँ (एफेसी १:२०-२२; हिब्रू ३:६; १ पत्रुस २:५)।
म उहाँको दाखको बोटको एउटा हाँगा हुँ (यूहन्ना १५:१-७)।
म उहाँको राज्यको एक प्रजा हुँ (कलस्सी १:१३)।
म उहाँको परिवारभित्र नयाँ गरी जन्मिएको छु (यूहन्ना १:१२-१३; याकूब १:१८; १ पत्रुस १:३,२३; २:२; १ यूहन्ना ५:१)।
म परमेश्वरको प्रजा हुँ किनकि उहाँको अनुग्रहले मलाई आफ्नो भनी दाबी गर्नुभएको छ(१ पत्रुस २:१०; प्रकाश २१:७)।
म पवित्र जनहरूसँगै एक सँगी नागरीक हुँ (एफेसी २:१९)।
म येशू ख्रीष्टभित्र बप्तिस्मा भएको छु (रोमी ६:३; गलाती ३:२७)।
म ख्रीष्टसँग उहाँको मृत्युमा सम्मिलित गराइएँ (रोमी ६:३-६,८-११; २ कोरिन्थी ५:१४; कलस्सी २:१२; २:२०; ३:३)।
म ख्रीष्टसँग उहाँको बौरिउठाइमा सम्मिलित गराइएँ (रोमी ६:५,८,११; २ कोरिन्थी ५:१५; गलाती २:२०; कलस्सी २:१२; ३:१)।
म पापका निम्ति मरेँ (रोमी ६:२)।
मेरो पुरानो मानिस ख्रीष्टसँग क्रूसमा टाँगियो (रोमी ६:६)।
म ख्रीष्टसँग क्रूसमा टाँगिएँ (गलाती २:२०)।
मैले शरीरलाई वासना र लालसाहरूसँगै क्रूसमा टाँगेको छु (गलाती ५:२४)।
म परमेश्वरका निम्ति जिउँदो भएको छु (रोमी ६:११,१३; गलाती २:१९-२०)।
ख्रीष्ट मेरो जीवन हुनुहुन्छ (फिलिप्पी १:२१; कलस्सी ३:४)।
म जीवनको नयाँपनामा हिँड्न सक्छु (रोमी ६:४)।
म आत्माको नयाँपनामा सेवा गर्न सक्छु (रोमी ७:६)।
म धार्मिकताका निम्ति जिउन सक्छु (१ पत्रुस २:२४)।
म व्यवस्थाका निम्ति मरेँ (रोमी ७:४; गलाती २:१९)।
म व्यवस्थाबाट मुक्त भएको छु (रोमी ७:६)।
म व्यवस्थाको अधीनमा छैन तर अनुग्रहको अधीनमा छु (रोमी ६:१४)
परमेश्वरका व्यवस्थाहरू मेरो हृदयमा लेखिएका छन् (हिब्रू १०:१६)।
म येशू ष्टसँग विवाहित भएको छु (रोमी ७:४)।
म ख्रीष्टको भागीदार भएको छु (हिब्रू ३:१४)।
म ख्रीष्टसँग उहाँका दुःखहरूमा सम्मिलित गराइएको छु (२ तिमोथी २:१२; फिलिप्पी १:२९; १ पत्रुस २:२०; ४:१२-१३; १ थेस्सलोनिकी ३:३; रोमी ८:१८; कलस्सी १:२४)।
मद्वारा परमेश्वरको ज्ञान प्रकट गरिन्छ (२ कोरिन्थी २:१४)।
मद्वारा ख्रीष्टको मीठो बास्ना प्रकट गरिन्छ (२ कोरिन्थी २:१५-१६)।
म ख्रीष्टको पत्र हुँ (२ कोरिन्थी ३:३)
म ख्रीष्टको महिमापूर्ण रूपमा बदली गराइँदैछु (२ कोरिन्थी ३:१८)।
म सिद्ध बनाइँदैछु (फिलिप्पी १:६)।
मेरो भित्री मान्छे दिन-दिनै नयाँ बनाइँदैछ (२ कोरिन्थी ४:१६)।
मैले ख्रीष्टलाई पहिरेको छु (गलाती ३:२७)।
म संसारको होइन (यूहन्ना १७:१४,१६)।
संसार मेरो निम्ति क्रूसमा टाँगियो (गलाती ६:१४)।
म संसारका निम्ति क्रूसमा टाँगिएँ (गलाती ६:१४)।
म परमेश्वरको सुसमाचारका निम्ति अलग पारिएको छु (रोमी १:१)।
म ख्रीष्ट येशूमा अलग गरिएको छु, पवित्र पारिएको छु (१ कोरिन्थी १:२; ६:११; हिब्रू १०:१०; यहूदा १)।
म पवित्र छु (कलस्सी ३:१२; हिब्रू ३:१; १ पत्रुस २:९; प्रकाश २०:६)।
म उहाँको धार्मिकताले पहिराइएको छु (प्रकाश १९:८)।
म एक पवित्र जन हुँ (१ कोरिन्थी १:२; फिलिप्पी १:२; कलस्सी १:२)।
म ख्रीष्टमा निष्कलङ्क छु (एफेसी ५:२७; कलस्सी १:२२; यहूदा २४)।
म सदाका निम्ति सिद्ध पारिएको छु (हिब्रू १०:१४)।
म आफैको होइन (१ कोरिन्थी ६:१९)।
म पवित्रताका निम्ति बोलाइएको छु (१ थेस्सलोनिकी ४:७)।
म स्वर्गको नागरिक हुँ (फिलिप्पी ३:२०)।
म एक परदेशी र यात्री हुँ र यस संसार मेरो घर होइन (हिब्रू ११:१३; १ पत्रुस २:११)।
म उहाँको प्रेमको पुत्रको राज्यभित्र सारिसकिएको छु (कलस्सी १:१४)।
मेरो हृदयको खतना गरिएको छ (कलस्सी २:११)।
मेरा विश्वासयोग्य परमेश्वरले मलाई पूरा रीतिले पवित्र पार्नुहुनेछ (१ थेस्सलोनिकी ५:२३-२४)।
मेरा विश्वासयोग्य परमेश्वरले मलाई दुष्टबाट जोगाउनुहुनेछ (२ थेस्सलोनिकी ३:३; २ तिमोथी ४:१८)।
ख्रीष्टले मलाई स्वतन्त्र पार्नुभएको छ -- साँच्चै स्वतन्त्र (यूहन्ना ८:३६; गलाती ५:१; १ कोरिन्थी ७:२२)।
येशू ख्रीष्ट मलाई छुटकारा दिनेवाला हुनुहुन्छ (रोमी ७:२४-२५)।
म पापबाट स्वतन्त्र छु (रोमी ६:७,१८,२२)।
जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र पारेको छ (रोमी ८:२)।
म परमेश्वरको दास (कमारो) हुँ (रोमी ६:२२)।
म ख्रीष्टको दास (कमारो) हुँ (१ कोरिन्थी ७:२२)।
म धार्मिकताको दास (कमारो) हुँ (रोमी ६:१८)।
म स्वतन्त्रताका निम्ति बोलाइएको छु (गलाती ५:१३)।
ख्रीष्ट मेरो शान्ति (मेलमिलाप) हुनुहुन्छ (एफेसी २:१४)।
मसँग ख्रीष्टको मन छ (१ कोरिन्थी २:१६)।
मसँग आत्मसंयमको आत्मा (स्वस्थ मन) छ (२ तिमोथी १:७)।
ख्रीष्टले मलाई समझशक्ति दिनुभएको छ (१ यूहन्ना ५:२०)।
मसँग ख्रीष्टको धार्मिकता छ (२ कोरिन्थी ५:२१)।
म सबै कुराहरूमा पूरा भरिभराउ पारिएको छु (२ कोरिन्थी ९:८)।
मसँग जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुराहरू छन् (२ पत्रुस १:४)।
म सधैं सन्तुष्ट हुन सक्छु किनकि मसँग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ (हिब्रू १३:५)।
मसँग मलाई चाहिने सबै हातहतियार छन् (२ कोरिन्थी १०:४; एफेसी ६:१०-१७)।
मसँग परमेश्वरको प्रशस्त गरी पुग्ने अनुग्रह छ (२ कोरिन्थी १२:९)।
मसँग खाँचो पर्दा सहायता गर्ने अनुग्रह छ (हिब्रू ४:१६)।
मसँग परमेश्वको सामर्थ्य छ (एफेसी १:१९; ३:२०)।
म पिताकहाँ पुग्न पाउँछु (एफेसी २:१८; हिब्रू ४:१६)।
मेरा एक महान् महापूजाहारी हुनुहुन्छ (हिब्रू २:१७-१८; ३:१; ४:१४-१६; ८:१)।
मेरा एक अटुट अन्तर्विन्तीकर्ता हुनुहुन्छ (हिब्रू ७:२५; ९:२४)।
मैले पाप गर्दाखेरिका लागि पितासँग मेरा एक धर्मी वकिल हुनुहुन्छ (१ यूहन्ना २:१)।
परमेश्वरसँग मेरो मिलाप भएको छ (रोमी ५:१)।
मेरो प्राणको लागि विश्राम छ (मत्ती ११:२८-२९; हिब्रू ४:९)।
म परमेश्वरको आत्माले डोर्‍याइँदछु (रोमी ८:१६)।
म परीक्षा र सङ्कष्टहरूमा सक्षम तुल्याइँदछु (१ कोरिन्थी १०:१३)।
मलाई आत्माद्वारा निश्चयता दिइँदछ (रोमी ८:१६)।
मलाई परमेश्वरबाट सान्त्वना दिइँदछ (२ कोरिन्थी १:३-७)।
म उहाँको शान्तिले निश्चल तुल्याइँदछु (फिलिप्पी ४:७)।
मलाई आत्माद्वारा सत्यता र ज्ञान सित्तैमा दिइन्छन् (१ कोरिन्थी २:१२)।
म सङ्कटमा पारिएको छैन (२ कोरिन्थी ४:८)।
म हताश पारिएको छैन (२ कोरिन्थी ४:८)।
म त्यागिएको छैन (२ कोरिन्थी ४:९)।
म अन्धकारमा छैन (१ थेस्सलोनिकी ४:४)।
परमेश्वर मेरा प्रशस्तता (योग्यता) हुनुहुन्छ (२ कोरिन्थी ३:५)।
परमेश्वर मेरा बल हुनुहुन्छ (२ कोरिन्थी १२:९-१२; फिलिप्पी ४:१३)।
परमेश्वर मेरा सहायक हुनुहुन्छ (हिब्रू १३:६)।
म एक सार्वभौम परमेश्वरको हातमा छु जसले सबै कुरालाई मेरो भलाइका लागि काममा लगाउनुहुन्छ (रोमी ८:२८)।
सबै कुराहरू मेरै निम्ति हुन् (२ कोरिन्थी ४:१५)।
मेरा परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ (रोमी ८:३१)।
मेरो हरेक खाँचो पूरा गरिन्छ (फिलिप्पी ४:१९)।
म ख्रीष्टसँग सहकर्मी हुँ (१ कोरिन्थी ३:९; २ कोरिन्थी ६:१)।
म उहाँको हातको कारिगरी हुँ (एफेसी २:१०)।
परमेश्वर मभित्र काम गर्नुहुन्छ (फिलिप्पी २:१३; हिब्रू १३:२१)।
परमेश्वरको वचनले मभित्र काम गर्दछ (१ थेस्सलोनिकी २:१३)।
म परमेश्वरद्वारा छाप मारिएको छु (२ कोरिन्थी १:२२; एफेसी १:१३)।
म चट्टान (ख्रीष्ट येशू) माथि बसालिएको छु (मत्ती १६:१८; १ कोरिन्थी ३:११)।
म ख्रीष्टमा सुरक्षित रूपले स्थापित भएको छु (१ कोरिन्थी १:२१; २ थेस्सलोनिकी ३:३)।
म परमेश्वरको सामर्थ्यले सुरक्षित राखिएको छु (१ पत्रुस १:५)।
म येशू ख्रीष्टमा सुरक्षित राखिएको छु (यहूदा १)।
म लोट्नदेखि बचाई राखिएको छु (यहूदा २४)।
मसँग स्वर्गमा सदा रहिरहने परमेश्वरबाटको भवन छ (२ कोरिन्थी ५:१)।
मेरो नाम स्वर्गमा सदालाई लेखिएको छ (लूका १०:२०)।
म विजेताभन्दा बढी छु (रोमी ८:३७)।
मैले ख्रीष्टद्वारा विजय पाएको छु (१ कोरिन्थी १५:५७)।
मैले संसारलाई जितेको छु (१ यूहन्ना ५:४-५)।
म ख्रीष्टमा सधैं विजयी बन्छु (२ कोरिन्थी २:१४)।
मभित्र विजयी ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जो शैतानभन्दा महान् हुनुहुन्छ (१ यूहन्ना ४:४)।
शैतानले मलाई छुन सक्दैन (१ यूहन्ना ५:१८)।
मेरो आशा जिउँदो छ (१ पत्रुस १:४)।
मेरो भविष्य महिमापूर्ण छ (रोमी ८:१८; २ थेस्सलोनिकी २:१४)।
मलाई अनुग्रहद्वारा अनन्त सान्त्वना र उत्तम आशा दिइएको छ (२ थेस्सलोनिकी २:१६)।
म स्वर्गीय राज्यका निम्ति बचाइराखिनेछु (२ तिमोथी ४:१८)।
मैले हल्लन नसकिने राज्य पाइरहेको छु (हिब्रू १२:२८)।
मेरो निम्ति स्वर्गमा ठाउँ सुनिश्चित गरिएको छ (यूहन्ना १४:२-३; १ पत्रुस १:४)।
मैले जीवनको रूखबाट खानेछु (प्रकाश २:७)।
मलाई दोस्रो मृत्युबाट कुनै हानि हुनेछैन (प्रकाश २:११; २०:६)।
मेरो एउटा नयाँ नाम पाउनेछु (प्रकाश २:१७; ३:१२)।
मलाई जातिहरूमाथि अधिकार दिइनेछ (प्रकाश २:२६; ५:१०)।
मेरो नाम जीवनको पुस्तकबाट कुनै रीतिले काटिनेछैन (प्रकाश ३:५)।
म परमेश्वरको मन्दिरमा खाँबो बनाइनेछु (प्रकाश ३:१२)।
म ख्रीष्टसँग उहाँको सिंहासनमा बस्नेछु (प्रकाश ३:२१)।
म सदा सर्वदा मेरा परमेश्वरसँग हुनेछु (प्रकाश २१:३-४)।
रचयिता: जोन न्यूटन (१७२५-१८०७)
१) अचम्मको अनुग्रहले बाँच्यो तुच्छ प्राण मेरो हराएको थिएँ अब पाइएको छु अन्धो देख्‍ने भएँ! २) अनुग्रहले ईश्वरको भय अनुग्रहले शान्ति कस्तो अमूल्य स्वाद अनुग्रहको जब विश्वास गरेँ! ३) अनेकौं जोखिम परीक्षा भएर आइपुगेँ यहाँसम्म ल्याउने त्यो अनुग्रहले पुग्‍नेछु स्वर्गमै! ४) प्रभुको वाचा भलाइको यो मेरो भरोसा उहाँ नै मेरो सूर्य र ढाल प्राण मेरो रहुन्जेल! ५) हजारौं वर्ष स्वर्गमा सूर्यझैं चम्कन्छौं यो अनुग्रहको प्रशंसा गाउँदै युग-युगौं रहन्छौं!
« "ख्रीष्‍टमा" हुनु भनेको के हो?